Indawo Yokungcebeleka Yamaholide endaweni Engcono Kakhulu ePenticton - I-Airbnb
Indawo Yokungcebeleka Yamaholide endaweni Engcono Kakhulu ePenticton
Izwa konke okunikezwa yi-Okanagan kusuka endaweni engcono kakhulu edolobheni! Ikhaya lethu liseMgqumeni ohlonishwayo weVancouver, eduze nendawo yokuqala umzila we-KVR ohlinzeka ngokuqwala izintaba, ukugibela ibhayisikili, ukufinyelela olwandle kanye nezindawo zewayini. Indawo yokudlela eyintandokazi kaPenticton iwuhambo lwemizuzu emi-5 nje, idolobha kanye nebhishi elidumile lase-Okanagan kungeminye imizuzu emi-5 ukusuka lapho. Futhi phakathi kwemizuzu engu-5 yokushayela (noma ukuhamba ngezinyawo imizuzu engu-30) ngeke uthole oku-1, hhayi oku-2... kodwa izindawo zokugcina iwayini eziyi-8! (Futhi kukhona amanye angama-30 noma ngaphezulu phakathi kwemizuzu eyi-15.)
Senze indawo eyimfihlo nenethezekile ngemuva kwekhaya lethu lapho uzojabulela khona indawo yokuhlala engaba ngu-650 sq ft ehlanganisa negumbi lokugezela lezingcezu ezi-3, ikhishi eligcwele elinendawo yokudlela engu-4, indawo yokuhlala enosofa, ikhebula kanye negumbi lokugezela. ukukhethwa kwama-DVD obusuku obuthule ngaphakathi kanye negumbi lokulala elikhulu elibanzi elinendawo eyanele yamapotimende noma ngisho nebhedi/ipeni lokudlala uma unengane encane!
I-HDTV engu-37" ene- ikhebula ye-premium, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.65 · 57 okushiwo abanye
Yindawo eyasidonsela ukuthenga lapha. Le cul de sac ethule yaziwa kakhulu kubantu bendawo nezivakashi njengoba kulapho ufinyelela khona umzila othandekayo we-KVR! Futhi sinenhlanhla ngokwanele ukuba eduze kwayo! (Okusho futhi ukuthi iyindawo enokuthula nenokuthula.) Siyasithanda lesi sikhala ngoba ungakwazi ukuhamba ngezinyawo kakhulu - noma ngabe uhamba ngezinyawo uye e-Bench Market ukuze uthole ikhofi noma ibhulakufesi ekuseni, uhambahamba uye ogwini lolwandle usuku lokuvilapha. e-Okanagan Lake, noma ushona phansi egqumeni phakathi nendawo yedolobha ebusuku e-Dream Cafe noma enye yezindawo zethu zokudlela eziyintandokazi. Futhi uma womile, indawo yewayini eseduze ingemuva kwendlu yethu--uhambo lwangempela lwamaminithi angu-3!
Kungenzeka sibe khona noma singekho ngesikhathi uhlala, kodwa sikuthumelele umlayezo wombhalo kuphela uma usidinga. Ungase usibone eduze kwendawo - ngakho-ke sicela uthi sawubona futhi usazise uma kukhona esingakwenza ukuze senze ukuhlala kwakho kungalibaleki.
Kungenzeka sibe khona noma singekho ngesikhathi uhlala, kodwa sikuthumelele umlayezo wombhalo kuphela uma usidinga. Ungase usibone eduze kwendawo - ngakho-ke sicela uthi sawubona f…